Semalt: Simple Simple Tricks Kuti Uve nechokwadi neEmail Security
Munhu wese anowanikwa paIndaneti anofanira kushandisa email pane imwe nguva kana vachida kana kwete. E-mail inomiririra se "facto" pakati pekukurukurirana, sezvo makambani achiri kuramba achishandisa email kuti ataurirane nevamwe, uye ichi chinhu chisingachinji.
Ichokwadi kuti munhu wose ane ruzivo rwemaiyo ndicho chikonzero chikuru chinoita kuti vaedze zvose musimba ravo kudzivirira kurwisana nemirwere, ransomware, uye malware kutumirwa kuburikidza ne email. Sezvo makambani achiri kuramba achitarisana nemamwe mashoko anonyatsonzwisa kuburikidza neemaimeri avo, vatengesi vanozviona sevanokosha zvikuru uye vanoedza pamusoro pezvinhu zvose kuti vaise maoko avo pazviri.
Zvimwe zvezvirwere zvinowanzoitika ndezvikonzero zvekusakosha kushandiswa nekushandiswa kwemaimeri - bandar togel indonesia. Artem Abgarian, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutungamiri, akagadzirira urongwa hwekuwana maimeri:
Usatora zvinyorwa kubva kune vasina kujaira
Ndiyo mazano akajeka anokwanisa kuwana. Kana i-mail inosvika mubhokisi rebhokisi uye uyo anotumira asingaoneki akajaira, kurasira email kamwechete. Vamwe vevashandi mazuva ano vauya nehutano hutsva apo vanoita pfungwa yekukosha kana kukurumidza muma email avo. Pakuzarura maeemail, vashandisi vanowanzowana chibatanidza nacho.
Vanotsvaga vanoshandisa kunyange kunyatsotarisa kusinganzwisisiki kuvanza kadhi yavo yakaipa. Vamwe vanoda kushandisa maitiro e spoof kuti vaone sevari vatumire vanotumirwa. Spoofing inovabvumira kushandisa nzira dzakaoma kuita kuti iite seyamamerica avo misoro neateri dzinobva kune zvinyorwa zvinovimbika. Nguva dzose ugare wakatarisa ma-email akadaro sezvaanoisa dambudziko guru pamishumo yese ye email..
Vanhu vakawanda havadi kuziva izvi, asi .doc uye .docx zvakapetwa ndezvimwe zvezvikwata zvakakurumbira zvinoshandiswa nevatengi kushandisa zvirwere zvemaeiri ane malware. Hazvina mubvunzo kuti zvinyorwa zveMicrosoft Word zvinobatsira zvikuru kubva kune "macro". Kunyange zvakadaro, vatengesi vanogona kuvashandisa kuti vashandise mavhairasi ane ngozi.
Tatova, kune mitsara ye complex complex ransomware, inopararira kuburikidza nemamerica, nekutanga kutanga kuva izwi file. Nokudaro, kunze kwekuti mutumeri asimbiswa kuti ari pamusoro pebhodhi, dzivisa Shoko rekubatanidza sezvavanokwanisa kuva mavhairasi anokuvadza.
Usambofa Wagoverana Nevamwe Mashoko
Ikozvino, nzira chete inonyatsozivikanwa kuburikidza nevashambadzi vanopinda kupinda mu-cyber-kuchengetedzwa kwemasangano ndeye kuburikidza nehupenzi, sezvakataurwa naVerizon. Kana vanokuvadza vachiita zvakanaka, kupisa hazvizodi kuti chero ruzivo rwehuchenjeri. Chikonzero ndechekuti kana vashandi vakaparadzira ruzivo rwemunhu pachake sepaswedi nemazita evashandisi, vashandi vanopinda mukati mezvirongwa zveI IT uye vanoba mashoko kubva maeimeri. Zvadaro zvinova nyore kurwisa sangano guru kushandisa mashoko akatorwa kubva kuvashandi vanoshanda ikoko. Muzviitiko zvizhinji, kuedza kupedzisira kunobva kuvashandisi vanoti vanove vashandi veI IT vachitarisira kugadzirisa zvakare password uye vanokumbira kutumira pamusoro pehupenyu hwemunhu.
Usambofa Uchatsvaga pa A Link Yakaiswa muIndaneti
Kana munhu akagamuchira email inonyunyuta nehungano nemirayiridzo kuti uise pairi, nguva dzose usazvidza email. Mafungiro akataurwa pano anogona nyore nyore kutumira mapeji eine malware, Trojans, uye mamwe mavharesi.
Shandisa passwords nguva dzose
Kugadzirisa kuva nechirongwa chakasiyana-siyana ikozvino ndiyo nzira yakanakisisa yekudzivisa kushungurudza-simba. Vashandi vanofanira kuita izvi kamwechete kana kaviri pamwedzi.